को मोडेम स्थापना। यसलाई लाग्छ भन्दा धेरै सजिलो
को कसरी कन्फिगर गर्न मोडेम र इन्टरनेट फर्कन? हामी यो deprived गर्दा हामी सबै इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्न accustomed र अत्यन्तै निराशा छन्। यो कारण सेट गर्न सकिन्छ। को मोडेम लागि अक्सर दोष। तपाईंको मोडेम कसरी कन्फिगर गर्न, हामी बुझ्न प्रयास गर्नुहोस्। महत्त्वपूर्ण वास्तवमा सेटअप प्रक्रिया जटिल छैन भन्ने तथ्यलाई छ। धेरै गाह्रो सरल निर्देशन र सुझाव सुन्न नयाँ र केही अनिच्छा को डर हटाउन। आफ्नै "मोडेम सेटअप" भनिने कार्य, तपाईं एक मुस्कान संग हेर्न पनि अरूलाई मदत गर्नेछ अर्को समय प्रदर्शन गर्न एक पटक प्रयास भएको।
मोडेम सेटअप ... यी शब्दहरू धेरै प्रयोगकर्ता छैन केहि भन्छ, र विदेशी जस्तै किबोर्ड मा अस्पष्ट मुद्रण सम्बद्ध ह्याकरहरूलाई बारेमा चलचित्रहरू। वास्तवमा, सबै सधैं मोडेम त्रुटि यस्तो सेवाको लागि भुक्तानी गर्न धेरै आवश्यक जो एक योग्य टेक्नीसियन सच्याउनुहुन्छ छैन रूपमा कठिन र छैन। हामीलाई भन्दा साधारण त्रुटिहरू र यी malfunctions सामना को विधिहरू विचार गरौं।
त्रुटि 691 - नियम, यो सन्देश तपाईं, वा यदि डाटा पहिले नै प्रयोग भइरहेका छन्, साथै नकारात्मक ब्यालेन्स को मामला मा गलत प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड प्रविष्टि गर्दा देखिन्छ। यो कसरी मोडेम त्रुटिहरू छुटकारा गर्न? पहिलो, सामान्यतया कारण यो छ, ब्यालेन्स जाँच गर्नुहोस्। यदि काम गर्दैन, तपाईंले सही स्तम्भ "पासवर्ड" र "प्रयोगकर्ता" मा डाटा प्रविष्ट गर्नुभएको निश्चित गर्नुहोस्। गर्न भन्दा अक्सर गल्ति मुद्रण डाटा को गल्ती आवश्यक छ कि भाषामा छैन। रूसी र ल्याटिन टाइप गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। "एल", "0" - - "हे" र जस्तै कुनै खाली ठाउँहरू, र "जटिल" वर्ण "1" को हिज्जे हो भनेर पक्का। तपाईंलाई मदत छैन र यो नयाँ डाटा एक जडान सिर्जना गर्न सजिलो छ भने। त्रुटि 651 विन्डोज 7/815 ओएस WindowsVista / 678 XP लागि - तीन परिस्थितिमा हुन्छ:
यदि कुनै डीएसएल संकेत (मा लिंक वा डीएसएल मोडेम वा सबै रङमा पिल पिल संग हल्का हस्ताक्षर) छ;
सायद यो स्टेशन वा सदस्य मोडेम मा उपकरण हङ छ;
गलत मोडेम सेटिङ गरे।
पहिलो दुई अवस्थामा, तपाईं त तपाईं सुरक्षित आफ्नो ISP कल र गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ, प्राथमिक मोडेम रिसेट मदत गर्न सक्छ (यो बन्द पछि 30 सेकेन्ड प्रतीक्षा सर्वश्रेष्ठ छ)। तिनीहरूलाई बुझ्न गरौं। उत्तरार्द्ध मामला र आवश्यकता लागि मोडेम सही पुन: कन्फिगर गर्नुहोस्।
सेटिङ मेनु प्रविष्ट गर्न, तपाईं कुनै पनि ब्राउजर (मोजिला फायरफक्स, ओपेरा, इन्टरनेट एक्सप्लोरर, वा अन्य कुनै पनि) आवश्यक ठेगाना पट्टी तपाईं मोडेम, अर्थात् को ठेगाना प्रविष्ट गर्न चाहनुहुन्छ यसको आईपी। सामान्यतया यो 192.168.1.1 छ। ब्राउजर तपाईं प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड प्रविष्ट गर्न विन्डो दिन भने, त्यसपछि ठेगाना सही छ। सामान्यतया, यी डाटा परिवर्तन, र यसैले, शब्द दुवै «व्यवस्थापक» क्षेत्रहरू परिचय गर्छन्। मेनु मा जा, बक्स डीएसएल स्वत: जडान र थप जाने ( «अर्को») अनचेक गर्नुहोस्। अर्को, निम्न मान VPI (0) र VCI (33) आवश्यक छ। अर्को क्लिक गर्नुहोस्। गर्न «PPPoE» जडान प्रकार बदलिएको छ, मा पारित। प्रत्येक प्रदायक खाता आफ्नो अवस्था बारे जानकारी। त्यसैले त तपाईं मुक्त क्षेत्र प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड निर्दिष्ट वा तिनीहरूलाई छोड्न जस्ताको तस्तै। अर्को क्लिक गर्नुहोस्। यस «Wan सेवा सक्षम» क्षेत्र टिकटिक र «सक्षम NAT»। नयाँ सेटिङहरू आवेदन गर्नुहोस् र मोडेम पुनः सुरु थिच्नुहोस्। चालक लागि यस प्रकारका मोडेम, रूपमा नियम, छैन आवश्यक छ। उपकरण स्वचालित रूपमा पत्ता छ।
के त्रुटि सन्देश 718 गर्छ? उच्च गतिको को कक्षा स्वामित्वको जडान गर्न यो विफलता, वा त्रुटि युएसबी-मोडेम को जडान कारण छ। यो समस्या समाधान गर्न, तपाईँले एउटा नयाँ उच्च गतिको जडान सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।
लोकप्रिय त्रुटि 720. त्यो पीपीपी प्रोटोकल को अमिल्दो वार्ता। यो त्रुटि अक्सर सही मोडेम लागि चालक स्थापना गर्दा अनुचित ओएस अद्यावधिक पछि हुन्छ। समस्या समाधान गर्न, तपाईं त सञ्चालन प्रणाली पुन सक्छन् वा मोडेम PPPoE मोडमा छैन। यो fixable छ।
लगभग सबै वर्णन गरे। तपाईं विजार्ड कल अगाडि (र यो उपयोगी हुन सक्छ) आफैलाई समाधान गर्न प्रयास गर्नुहोस्। त्यहाँ कठिन केही छ, मलाई विश्वास गर्छु।
राउटर डी-लिङ्क dir 615 - को "बीलाईन" को लागि सेट, "Rostelecom", "Ufanet"। IPTV सेटअप तरिका
Monoblock "लेनोभो": समीक्षा, विनिर्देशों, समीक्षा
मोडेम "मेगाफन": को मोडेम को गति कसरी वृद्धि गर्न? कसरी 4G-मोडेम "मेगाफन" को गति घरमा वृद्धि गर्न?
कसरी जो ग्राफिक्स कार्ड गर्नुपर्छ विन्डोज पत्ता लगाउन?
नेटवर्क भिडियो रिकर्डर: मोडेल विशेषताहरु
एक स्ट्रोक पछि पुनःस्थापना, यो जान्न आवश्यक छ
रातो खरायो: विवरण Sawmills
अपरिचित शब्दहरू बारे: सञ्चितिको मतदान के हो?
के राम्रो, "windose 7" वा "8" छ? तुलना "windose 8" र "7 windose"
यो कर्मचारी विवरण लेखिएको छ रूपमा
शुरुआती लागि graffiti। कसरी graffiti लागू गर्न सिक्न
गैर-रक्सी पिउने ककटेल: व्यञ्जनहरु milkshake ब्लेंडर